शीर्ष5सबैभन्दा रोमान्टिक ट्रेन यात्राको युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > शीर्ष5सबैभन्दा रोमान्टिक ट्रेन यात्राको युरोप मा
तपाईं वर्ष विवाह गरिएको छ कि छैन भनेर, वा सम्बन्ध प्रारम्भिक चरणहरु मा अझै पनि छन्, बाट गुणस्तर समय सँगै बिताए हरेक दम्पतीले लाभ उठाउन सक्छौं. यो प्रणय दिवस को लागि प्रयास गर्न विशेष गरी राम्रो. रेल द्वारा यात्रा रोमान्टिक सुरु गर्न सही तरिका हो र सुहागरात Getaway आफ्नो प्रेम एक साथ. को देहात मार्फत वा पहाडमा चुपचाप गति. विगतमा आकर्षक ट्राभर्स, प्राचीन सहर वा हिमनदीय को किनारा साथ ताल. यहाँ पनि शीर्ष5युरोप सबैभन्दा रोमान्टिक रेल यात्राको. प्रत्येक प्रणय दिवस लागि विशेष कुरा प्रदान गर्दछ.
लन्डन गर्न भेनिस is our First Romantic Train Journeys
यो रेल यात्रा तपाईं र ल्याउनेछ आफ्नो को रसीला मार्फत एक प्रेम देहात. त्यसपछि तपाईं स्विट्जरल्याण्ड को प्रभावशाली पहाड विगतका रोल छौँ र अस्ट्रिया. अर्को, अन्तत: भेनिस ग्रान्ड नहरको किनारमा पुग्नु भन्दा पहिले तपाईंले रेलको मार्फत इटालीको भेरोनाको सबैभन्दा सुन्दर दृश्य अनुभव गर्नुहुनेछ.
पेरिस गर्न राम्रो, फ्रान्स
Talking the train through France you’ll be exposed to the famous color and light of the country. कोटे Azur नीलो पानी गर्न बैजनी लैवेंडर क्षेत्रहरू देखि. सुनको सूर्यका जादुई यो सबै immerses जो बाटो मा marvel, तपाईं एक व्यवहार लागि हुनुहुन्छ. सबै को सबै भन्दा रोमान्टिक शहर मा शुरू, पेरिस, तपाईंको रेल यात्रा नाटकीय तटों को काल्पनिक coastlines पारित हुनेछ. तपाईं पनि गर्नुहुनेछ सुरम्य गाउँहरू हेर्नुहोस् र सूर्यमुखी र लैवेंडर प्रोभेन्स को क्षेत्रहरू.
रोम फ्लोरेन्स, इटाली
संस्कृति को वर्ष हजारौं अनुभव र दुई प्रतिष्ठित इटालियन रत्न, सबै एक रोमान्टिक साहसिक मा. को masterpieces र फ्लोरेन्स को तुस्कन व्यञ्जनहरु हेर्नुहोस्. पनि, रोम को मुकुट jewel भ्रमण, भेटिकन. के राम्रो हुन सक्छ?
तपाईं र तपाईंको को भव्य इटालियन देहात आफ्नो गाडी विन्डो विगतका प्रकट रूपमा एक दुई सुन्दर शहर बीच रेल यात्रा गर्न सक्छन् प्रेम. यो पक्कै पनि युरोप मा सबै भन्दा रोमान्टिक रेल यात्राको मध्ये एक छ.
Levanto लास्पेजीया गर्न – शीर्ष5युरोप सबैभन्दा रोमान्टिक रेल यात्राको
यस सानो खण्ड रेलवे पाँचवटा इटालियन गर्दछ Riviera villages of the Cinque Terre नाटकीय फेसनमा. रेल यात्रा प्रत्येक तरिका एक घण्टा भन्दा कम छ, त्यसैले रेल एक तरिका लिन. त्यसपछि तपाईं खर्च गर्न सक्छन् दिन पैदल यात्रा अद्भुत गाउँ-जडान फिर्ता तपाईं कहाँ सुरु गर्न ट्रेल्स. यो रेल यात्रा को Ligurian समुद्र को दृश्य साँच्चै शानदार छ, प्यास्टेल गाउँमा, terraced दाखबारी साथै जीवंत क्षेत्रहरू.
नाइस गर्न ज्यूरिख
ज्यूरिख तपाईंको रोमान्टिक रेल यात्रा सुरु. Bahnhofstrasse यात्रा, तिनी हरु मध्ये आकर्षक किनमेल सडकमा संसारमा, र एक स्मृति चिन्ह किन्न. धेरै-प्रेम Kunsthaus कला मा भ्यान Gogh र Monet को उल्लेखनीय काम मा marvel ग्यालरी. को सुंदर मा snuggling अघि जोडे ज्यूरिख मा गर्न को लागि धेरै त्यहाँ रेल सवारी नाइस गर्न. यस उल्लेखनीय तिर लेक ज्यूरिख को बैंकहरू साथ यात्रा अल्पाइन दृश्यहरु. तपाईं पनि सुन्दरी पहाड Meadows र सुन्दर दृश्य पास छौँ. के थप रोमान्टिक हुन सक्छ?
संग रोमान्टिक रेल यात्रा लिएर सोच आफ्नो एक प्रेम? जाऊ त्यहाँ एक ट्रेन सेव हाम्रा सबै विशेष भाडा जाँच र आफ्नो अर्को साहसिक योजना सुरु गर्न!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-5-romantic-train-journeys-europe%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#रोमान्स लन्डन रोमान्टिक romanticdestinations ट्रैवलफ्लोरेन्स travelnice ट्राभेलपारिस travelrome travelvenice